Lasan'ireo mpangalatra avokoa ireo entana rehetra teo an-tokontany, ny alin'ny taom-baovao teo no nitranga ny fanafihana. Voalazan'ny lasibatra fa heno ihany fa nisy nikorontana ny vy tao anaty tamboho saingy manoloana ny hery tsy mitovy dia tsy sahy nivoaka. Naharitra ora vitsy ny halatra raha ny zavatra very maro. Ny mahagaga anefa tsy dia zavatra sarobidy no very ka azo heverina fa mpangalatra mafy ady no tao. Hazo sy vy ary kojakoja fanaovan-trano no nanjavona. Voalazan'ny voatafika fa efa indroa nisy nianika ihany ny tamboho tao anatin'ny roa volana lasa fa tsy nisy very tamin'izany, tsy nisy ny naratra. Misy andrimasim-pokonolona ihany eny an-toerana saingy ahiana fantatry ny jiolahy ny fotoana iasan'ireo mpiambina. Isaky ny ora roa mantsy ny fandehanan'ny andrimasom-pokolona fa ny alin'ny taom-baovao azo heverina fa reraka ireo mpiambina. Nirongatra indray ity halabotry ity teny an-toerana tato ato.